Martech Zone: Wamkelekile kuPapasho lwam olutsha lweMartech! | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 6, 2017 NgoMvulo, Novemba 2, 2020 Douglas Karr
Unyaka nje kuphela ndigqibile ukucoca indawo yethu yeWordPress. Ngelixa bendiluthanda ubeko, bendineetoni yeeplagi kunye nokwenza ngokwezifiso ukwenza ukuba isebenze ngendlela endifuna ngayo, nayo. NgeWordPress, enokuthi iqale ukupela inhlekelele kwindlela yokusebenza kwaye bendibona ukuqhekeka kwisiseko.
Ke, ndiye ndaya kuzingela uyilo olunokuthi lubandakanye imiboniso emikhulu kakhulu kunye nokuphendula kwizikrini ezihamba-konke ngelixa bendikhuthaza abafundi bethu ukuba banamathele ukufumana ulwazi abalufunayo.
Ndenza isiko WordPress umxholo womntwana ngaphezulu komxholo osisiseko kunye noxhaswe kakuhle othengiweyo Umxholo webali, emva koko songeze ukusebenza okuhle esikufunayo ukutyhala umxholo kwisicelo sethu esiphathwayo kunye nokudibanisa ukutya kwethu kwezinye iinkonzo ezithile apho sifuna ukwabelana ngomxholo.
Njengoko unokuba uqaphele, ndaphinda ndabuya kwiBlog yeTekhnoloji yeNtengiso ukuya Martech Zone, kusetyenziswa ixesha elithile kumzi-mveliso wentengiso kunye netekhnoloji yokuthengisa… iMarTech. Ibhlogi yebhlogi yayihambile ngendlela njengoko ndandiqhubeka nokupapasha uphando kunye namanqaku agxile ekuncediseni iingcali kuphando, ukufumanisa, kunye nokufunda malunga netekhnoloji yokuthengisa kunye nentengiso.
Ndinendawo elula endiyithengileyo intengiso. iteknoloji Ukuya phambili apha (singahambisa yonke into idlulele kwakanye. imimandla yetekhnoloji iyaziwa ngakumbi).
Yintoni enye eyenzayo Martech Zone Unayo?
Resources - Ngoku ndinefayile ebanzi Izixhobo zeMartech icandelo, elibandakanya imisitho, amaphepha emhlophe, kunye nezinye izixhobo.
podcast -Ndiyaqhubeka ndenza udliwanondlebe neenkokheli zesoftware, iingcali, ababhali kunye nezithethi ezivela kwintengiso kunye nentengiso Martech Zone udliwano.
Yeyiphi eyona njongo iphambili kaMartech?
Ndingaba kude neminyaka elishumi, kodwa ndihlala ndikhangele kubambiswano kunye neefemu zobulungu, ababoneleli, uluntu, izixhobo zemfundo, kunye nezatifikethi… ukuba unento eyongeza kwixabiso lopapasho lwam, ndazise!
tags: blogujenn lisakItekhnoloji yentengiso yebhlogmartechibhlog yemartechuluntu lwaseMartechiziko lokufunda iMartechixeshaisihlokoumxholo wegama
Ziqala njani iiNdlela zokuqalisa ukuBhengeza ukuSungulwa kwabo kwiHunt Hunt